Afaan Oromoo – Page 4 – Welcome to bilisummaa
Diinni (motummaan Habashaa) kallatiin sanyii uummata Oromoo lafa irraa duguuguuf milkaawu yeroo hanqateetti tarsiimoo afaan, aadaa, fi seenaa Oromoo ittiin dhabamsisu baafatee sochowe. Angoo waranaa …
Kan ifni kessanuu akkanaa dukkanti teessan akkamumaa?
Kan ifni kessanuu akkanaa dukkanti teessan akkamumaa? Beekaan keessan kunoo kanaa Barnoonni isaa hangasumaa? Ifni keessanuu cillimii Tan dukkanaa waan himanii Hayyuun himtan kanumaa mii? …
Teenyee hin ilaalluu; ka’I hin lollaa aabbee Dur yeroo abbaan koo qabu mootummaa Yeroo gadaan bulluu ; isa hundee dimokraasii Lammiin koo quufee ormaaf …
Taammanaa Bitimaa irraa Qubeen Oromoo kun erga waggaalee 25 dura, bara 1991 keessa: hayyuuwwan, beektonni, dureewwanii, roogeyyii fi jajjabeewwan Oromoo dira sonaan guddicha wiirtuu …
Bakkisuuf baktii Callisuuf dhaltii Mala saree dhaltee diddee barbaadaa? Mala saree ollaa Tan nama taate faallaa *** Summii itti godhan ima nyaattii Nabseen illee waa …
Nu haa baraaru; Jedhee jechisiisaa Godhee goosisaa Kan afaan hammaatu Kan mataa jabaatu Hamiinis kan nama nyaatu!! Nu haa baraaru Nyaapha gargaaruu Fira ammoo …
QOOSAA:- ADDA DURUMMAA DUREESSA TOKKOO Akkuma beekamu biyyoota guddatan fkn USA keessatti namoota qofaaf osoo hin taane beeyladoota akka fardaafis kunuunsi addaa ni godhama. Fkn …
Bakkisuuf baktii Callisuuf dhaltii Mala saree dhaltee diddee barbaadaa? *** Summii itti godhan ima nyaattii Nabseen illee waa boqattii Irraa kaasan ni kaattii Mala saree …
DUBBII FI ABBAA DUBBII EESSA JALAA HOFFOLAN? Abbaan dubbii nu rakkisee maal nuuf eayya? Dhiyaa barii dubbimaan nutti deema. Dubbii isaa dhangaggaayaa sobaa …
Gamteessaa Sabaatiin JECHOOTA GAMNAA KUTAA 8FFAA Waa Shan Booda Waa Shan Jirti Qabeenyaa heddu kuufame booda hanni jirti Rakkoo booda baldhoon jirti Carraaqqii booda …